Italian airport expansion opposed |
Bogga ugu weyn » Wararka Safarka » Balaadhinta garoonka diyaaradaha ee Talyaanigu waa laga hor yimid
Balaadhinta garoonka diyaaradaha ee Talyaanigu waa laga hor yimid
SIENA, Italy (eTN) - Qorshayaasha magaaladan loogu keenayo da'da duulimaadka iyada oo la ballaarinayo garoonkeeda yar waxaa u tartamaya koox muwaadiniin ah oo xiiseynaya oo sheegaya in Siena ay si fiican u shaqeyneyso, sida ay tahay.
Waxa ugu dambeeya ee ay dadka deegaankani rabaan waa dalxiisayaal dheeri ah oo nus milyan ah oo kuwa taageera garoonka ay saadaalinayaan inay ka soo degi doonaan Siena sanadka 2020. Dalxiiska ayaa mar horeba soo kordhay, kuwa naysayers ayaa ku doodaya, iyadoo in ka badan hal milyan oo dalxiisayaal ah ay ku imaanayaan dhulka sanad walba, inbadan ayaa jiitay ficilkii Siena ee faraskii midabada badnaa, il Palio.
Ma rabaan dhismaha Terminal cusub, baarkinka gawaarida, iyo kaabayaasha dhaqaalaha si ay ugu adeegaan awooda sii kordheysa ee garoonka, waxayna ka baqayaan in dalxiisayaal badan ay kaliya u horseedi doonaan shirkado ganacsi oo ballaaran, sida xarumaha laga baxo ama silsiladaha hoteelada.
Waxay sidoo kale ka walwalayaan buuqa, wasakheynta, iyo saameynta ay garoonka diyaaradaha ku yeelan karto baadiyaha ku xeeran, iskudhaf kaniisado qarniyadii hore, qalcado, iyo xerooyin ku dhex yaal kaydadka dabiiciga ah, kaymaha, iyo dhul beereedka.
Horumarka laguma cabiri karo oo kali ah kobcinta wax soo saarka guud ee dalka, ayuu yiri Luciano Fiordoni, oo ah dhaqaaleyahan ka hadlay isu soo bax ka dhan ah garoonka diyaaradaha ee Siena. “Waa inaad door ka qaadataa tayada nolosha. Kama diidanahay koritaanka, laakiin ujeedkeena ugu weyn waa inaan sii ahaano aadanaha. ”
Laakiin garoonka diyaaradaha ee Ampugnano ee maamulka hadda jira beddellada ayaa u fudud: koraan ama ku tuur tuwaalka.
Waxaa la dhisay 1930-kii sidii garoon diyaaradeed oo loogu talagalay ciidamada Mussolini, waxay isu rogtay rayid dhawr sano ka hor waxaana tan iyo xilligaas ka socday dhiig bax lacag caddaan ah, inta u dhexeysa nus malyan iyo 800,000 euro, ama ku dhow $ 1.2 milyan, sanadkii, sida uu sheegay madaxweynaha guddiga, Enzo Viani. "Waxay ahayd wax aan macquul ahayn in laga fekero inay sii socon karto lacag la'aanta," ayuu ku yiri telefoonka. "Waxay ahayd inaan go'aan gaarno."
Go'aankaas wuxuu ahaa qandaraas dadweyne oo loogu talagalay mashruuc lagu ballaarinayo garoonka diyaaradaha oo ay ku guuleysatay horaantii sanadkan Sanduuqa Galaxy, oo ah sanduuq kaabayaasha kaabayaasha dhaqaalaha ee gaarka loo leeyahay oo maalgashadayaasheeda ay yihiin Faransiiska Groupe Caisse des Depots, Talyaani Cassa Depositi e Prestiti iyo Jarmalka bangiga horumarinta gobolka Kreditanstalt fuer Wiederaufbau. Bangiga Maalgashiga Yurub sidoo kale waa mid kamid ah maalgashadayaasha Galaxy.
Iyadoo maal-gashiga Galaxy ee 50 milyan-euro, iyo $ 30 milyan oo kale oo ay ku tuureen saamileyda garoonka hadda - Siena ee dawladaha hoose iyo dawladaha gobolka, rugta ganacsiga, degmada Sovicille iyo bangiga maxalliga ah ee Monte dei Paschi di Siena - garoonka diyaaradaha ayaa faa'iido yeelan lahaa , Viani ayaa yiri.
Asal ahaan, maalgashiga wuxuu hubin doonaa in dhabbaha diyaaraduhu ay shaqeyn karaan dhamaan dhererkiisa - 1,500 mitir, ama 4,920 cagood - oo u oggolaaneysa diyaaradaha dhexdhexaadka ah ee qaada meel kasta oo u dhexeysa 30 ilaa 80 qof inay ku shaqeeyaan si nabadgelyo ah Xilligan, diyaaradaha fulinta iyo diyaaradaha fudfudud ayaa macaamiisha ugu muhiimsan garoonka ka ahaa.
Mashruuca wali si rasmi ah looma aqbalin iyadoo maamulada maxalliga ah ay miisaamayaan natiijooyinka daraasadaha saameynta deegaanka ayna cabirayaan dareenka muwaadiniinta maxalliga ah, ayuu yiri Viani.
Sida ku xusan mashruuca Galaxy, oo laga heli karo websaydhka garoonka diyaaradaha Siena, garoonka diyaaradaha ee la ballaadhiyey wuxuu martigelin doonaa duulimaadyada illaa 15 magaalo oo u badan - caasimadaha Yurub - sannadka 2009. Dalxiisayaasha soo galaya waxay ka tegi doonaan ku dhowaad 150,000 sannadka 2009 illaa ku dhowaad 330,000 sannadka 2012.